Maxaad Kala Socotaa Dal Islaam Ah Oo Hoy U Noqday Ka Ganacsiga Daroogada Heroin? | Kaafi News
Maxaad Kala Socotaa Dal Islaam Ah Oo Hoy U Noqday Ka Ganacsiga Daroogada Heroin?
November 24, 2020 - Written by admin
Buundo aad u mashquul badan hoosteed, oo ah goob qashin uu ka buuxo ee caasmiadda Kabul ee Afgaanistaan, waxaa ku nool nin darbi-jiif ah oo ay duruuf ay ka muuqato.
“Ma aha goob loogu talagalay in bina’aadam uu ku noolaado,” ayuu yiri Khudadad, oo 48 jir ah. “Xitaa uma qalanto in Eey uu ku noolaado.”
Khudadad waxaa uu qabatimay darogada nooca loo yaqaan heroin iyo methamphetamine – waxaa uuna noolashan ku jiray 5-tii sano ee ugu dambeysay.
Daroogadda noocan ee Heroin, waxay muddo dheer-ba dhibaato ku haysay magaalada Kabul, balse qaar badan oo ka mid ah dadka ku nool halkaas ayaa imika u leexanaya isticmaalka daroogada nooca loo yaqaano meth, oo ah mid ka raqiisan Heroin, balse leh halis la mid ah.
“Markii aan bilaabayay daroogadan, nooca meth, ma aysan ahayn mid dad badan ay garanayeen,” ayuu yiri Khudadad. “Balse sanadihii ugu dambeeyay dad badan ayaa isticmaalayay.”
Warbixin cusub oo la soo saaray Talaadadii ayaa ka digtay in Afgaanista ay noqonayso goob udub dhaxaad u ah soo saaridda daroogadda nooca methamphetamine ee caalamka oo dhan.
Dalka Afganistaan ayaa horey u ahaa isha darogada ugu badan ee Heroin ay ka timaado ee dunida loo kla dhoofiyo.
Balse warbixinta ay soo saartay hay’adda midowga Yurub u qaabilsan la socodka maandooriyaha, ayaa ka digeysa in daroogadda nooca Meth ay mar kale noqon karto Afganistaan meesha ugu badan ee laga soo saaro.
Sare u kaca ayaa loo aaneeyay in daroogada laga heli karo goobo badan oo aan ahayn goobaha beeraha loogu talagalay dalka Afgaanistaan.
Qoraalka sawirka,Goob lagu soo saao daroogada nooca meth dalkaasi Afqanistaan
Dr David Mansfield, oo ah khabiir ku taqasusay maandooriyaha laga soo saara Afganistaan, sidoo kalena wax ka diyaariyay warbixinta, ayaa sheegaya in daroogada markii hore ay qaali ahayd balse haddan ay dadka si sahlan uga heli karaan farmashiyaasha.
Daroogadda nooca ephedra ee laga helo dalalka kale waxaa laga sameyn jiray nooca meth, balse waxaa la ogaaday in dalka ugu badan ee soo saaro uu yahay Afgaanistan.
Iyada oo la isticmaalayo sawirro lagu qaada Dayax-gacmeed iyo waliba wareysiyo laga qaaday dadka soo saara daroogada, ayay Dr Mansfield iyo kooxdiisa cilmi-baarayaasha, ogaadeen in 300 oo sheybaar oo ku yaalla degmo lagu magacaabo Bakwa ee Afgaanistaan, looga shakisan yahay inay sameyaan daroogada nooca ephedrine.
Goobtaas ayaa noqotay mid udub dhexaad u ah ka ganacsiga daroogadda nooca meth ee dalkaas, balse Dr Mansfield ayaa sidoo kale bilaabay in uu ogaado goobaha kale ee ay ku yaalaan sheeybaarada.
Qoraalka sawirka,Daroogada nooca ephedra ee laga sameeyo daroogada nooca meth
Mareykanka ayaa horey u duqeeyay goobo la sheegay in lagu farsameeyo daroogada oo ku yaalla dalka Afganistan.
Maalin kali ah, wuxuu Mareykanak duqeeyay illaa 68 goobood, bihsii May, sannadkii 2019.
Balse khasaaraha rayidka ee ka dhasay duqeymahaasi iyo warshadaha lagu farsameyo daroogada oo laga dhiso cooshado oo haddii la duqeeyo xitaa dib loo dhisi karo, ayaa horseeday in Mareykanka uu joojiyo duqeynta.
Kooxda Taliban, ayaa dhankooda la sheegay in ay canshuur ka qaadan dadka ka ganacsada dhoofinta daroogada noocyadeeda kala duwan ee dalkaas.
Warbixinta ay soo saartay hay’adda midowga Yurub u qabilsan la socodka daroogada, waxaa lagu sheegay in Taliban ay, qiyaas ahaan, sannadkii ka hesho illaa $4 Milyan oo dollar, degmada Bakwa oo kali ah.
Kooxda Taliban ayaa canshuuro ka qaada warshado kala duwan oo ku yaalla goobaha ay maamulaan, inkastoo ay beeniyaan in ay xiriir la leeyihiin ka ganacsiga maandooriyaha.
Mid ka mid ah dadka daroogada ka ganacsada oo codsaday in magaciisa la qariyo ayaa BBC u sheegay in “kooxda Taliban ay canshuur ka qaadaan dadka beeera noocyada kala duwan ee maandooriyaha sida ephedra iyo kuwa ganacsi ahaan u sii iibiya.”
“Waxaa meel kasta yaalla isbaarooyiin ay dhigtaan kooxda Taliba,” ayuu yiri. Wuxuu intaa ku daray: “Sidaasi daraadeed kama qarin kartid.”
Markii la waydiiyay sababta Taliban aysan diinta uga mamnuucayn iiibinta daroogada, wuxuu ninkan ka ganacsada daroogada, sheegay in kooxda Taliban ay yiraahdaan, “waxaan ku jirnaa dagaal, balse marka la gaaro waqtiga ku haboon ay mamnuuci doonaan.”
Qoraalka sawirka,ilaa 300 oo sheybaaro ah oo looga shakisan yahay in lagu farsameeyo daroiogada ayaa ku yaalla degmada Bakwa oo kali ah
Qaar ka mid ah noocyada maandooriyaha nooca meth ee laga soo saaro dalka Afganistaan, waxaa lagu isticmaalaa gudah dalkaasi, halka sidoo kale xuduudda laga gudbiyo oo la geeyo dalka Iraan.
Balse waxay u muuqataa in loo safriyo goobo ka fog xudduudada dalka Afgaanistaan.
Sannadkan, boqollaal kilo garam oo darogo ah oo qiimahooda lagu sheegay $10 milya oo doollar, loogana shakisan yahay in dalka Afganistaan laga keenay, ayaa lagu qariyay doon waxaana qabtay ciidamada badda ee dalka Sri Lanka.
Sidoo kale, waxaa maandooriyaha gacanta ku dhigay ciidamada caalamiga ah ee ilaaliya badda Gacanka Carabta.
Waxaa jirto cabsi laga qabo in daroogada nooca methamphetamine ay xitaa gaarto qaar ka mdi ah dalalka Yurub.
Iyada oo daroogada nooca meth ee laga soo saaro Afqanistaan loo doofiyo guud ahaan caalamka, haddana waxaa saameyteeda laga dareemaa jidadka caasimada dalkaas ee Kabul.
Markii aan dib ugu laabano buundada hoyga u ah dadka qabatimay daroogadan – Qof walaalkii uu ka mid yahay dadka halkaas deggan ee isticmaala daroogada wuxuu sheegay in ay muddo bilo ah raadinayeen. “Hooyadeen walwal iyo isku buuq ayay u dhimatay,” ayuu yiri.